Loka Paritana: ampahafantarina ireo hiatrika famaranana | NewsMada
Loka Paritana: ampahafantarina ireo hiatrika famaranana
Par Taratra sur 07/02/2019
Manosika ny mpanakanto hiroso hatrany amin’ny fampivelarana ny talentany ny fisian’ny fifaninanana. Iray amin’ireny ny “Loka Paritana” izay efa ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy no ivelarany. Manana anjara toerana amin’izany ny mpanakanto malagasy.
Randrianarivelo Mahefa Dimbiniaina, mpanakanto mpakasary, nisafidy ny anarana hoe Matchbox D. Izy no nampahafantarina voalohany amin’ireo mpifaninana 10, notsongaina hiatrika ny safidy farany amin’ny Paritana andiany fahatelo. Raha tsiahivina, sehatra iray manohana sy mampiroborobo ny vokatry ny kanto ankehitriny ity fifaninanana ity.
Toy ny mahazatra, 10 no nofantenana tamin’ireo nandefa ny sanganasany ka ampahafantarin’ny mpikarakara, ao amin’ny pejy “facebook” ny mombamomba azy ireo tsirairay, isan’andro. Hisy ny fampirantiana ny sanganasan’izy ireo miaraka, amin’ny toerana iray. Aorian’izany ny fampahafantarana izay mendrika indrindra.
Mpanakanto roa no efa nisitraka ny fanohanan’ny mpikarakara ny Paritana noho ny nahazoan’izy ireo ny loka. Tsy iza izany fa i Temandrota, mpanakanto araka endrika amam-bika, sy i Dwa, mpanao tantara an-tsary. Azo tsapain-tanana ny tombontsoa azon’izy ireo tamin’izany, toy ny fivahiniana narahina famokarana na “résidence de création”, tany Paris Frantsa. Narahin’ny fampirantiana ny asa vita tao anatin’izany.
Mbola ampirantiana, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, hatramin’ny asabotsy izao ny “Empreintes”, ireo zava-bitan’i Dwa, izay efa nampitolagaga ireo vahiny, nandritra ny fanehoana azy tany Frantsa tany.